Muuri News Network » Zlatan Ibrahimovic Oo Man United Ku Tilmaamay Kooxdii Ugu Waynayd Ee Uu Ka Soo Ciyaaray Kadib Guushii Community Shieldka Ee Ay Red Devils Garaacday Kooxda Leicester City
Zlatan Ibrahimovic Oo Man United Ku Tilmaamay Kooxdii Ugu Waynayd Ee Uu Ka Soo Ciyaaray Kadib Guushii Community Shieldka Ee Ay Red Devils Garaacday Kooxda Leicester City
Zlatan Ibrahimovic ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee rasmiga ahaa oo uu u saftay kooxdiisa Manchester United waxa uu kula guulaytay koobka Community Shieldka. Manchester United ayaa 2:1 ku garaacday kooxda Leiceser City kulankii ka dhacay Wembley Stadium, waxaana goolka guusha kooxda Mourinho u horseeday xidiga ree Sweden ee Ibrahimovic.
Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in Manchester United ay tahay kooxdii ugu waynayd ee uu ka soo ciyaaray isaga oo hore uga soo muuqday kooxaha Barcelona, AC Milan, Juventus, Inter Milan iyo PSG, wuxuuna hadalkiisa raaciyay in kaliya AC Milan uu barbaro dhigi karo.Zlatan Ibrahimovic ayaa sheegay in koobka Community Shieldku uu yahay koobkiisii 31 aad wuxuuna rajaynayaa in uu koobab badan kula gulaysan doono Red Devils.
Zlatan Ibrahimovic ayaa yidhi: “Waa koobkaygii 31 aad waxaanan ahay faraxsane sareeya.Waa dareen fiican. Waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay ee rasmi ah oo aanu koob u tartamaynay waananu ku guulaysanay. taas ayaa ah wax walba iyo ku guulaysiga koobabka”.
Intaa kadib Zlatan Ibrahimovic ayaa rajeeyay in uu koobab badan kula guulaysan doono kooxdiisa cusub ee Manchester United wuxuuna yidhi:“Waxaan ku rajo waynahay in aan kan inka badan ku guulaysan doono, wax wayn ayaanu halkan ka dhisaynaa”.
Dhinaca kale Zlatan Ibrahimovic ayaa qiray in kulankii Leicester City uu ahaa kulan adag balse Man United ay tahay koox fantastik ah wuxuuna yidhi: “Waxa uu ahaa kulan adag, waad arki kartaa in Leicester City ay xoogan tahay oo ay tahay koox isku duuban, laakiin Man United waa koox fantastik ah waxaanan haystaa ciyaartoy fiican oo aanu isku koox nahay iyo tababare fiican. Qof kastaaba wuu garanayaa tababaraha, waxa uu doonayaa in uu guulaysto wax kasta ayuuna u samaynayaa in uu guulaysto”.
Xidiga ree Sweden ee Ibrahimovic oo kooxo badan oo waa wayn ka soo ciyaaray ayaa sheegay in Man United ay tahay kooxda aduunka ugu wayn isla markaana uu barbar dhigi karo AC Milan oo kaliya wuxuuna yidhi:“Tani waa kooxdii ugu w